सास्ती पाउनु पर्ने कारण देखाउ ? « Loktantrapost
सास्ती पाउनु पर्ने कारण देखाउ ?
२४ श्रावण २०७४, मंगलवार ११:५४
यही साउन ३१ गतेदेखि मुलुकभरका पेट्र«ोल पम्पहरु अनिश्तिकालसम्म बन्द (हड्ताल) हुने चेतावनीले सर्वसाधारणमा त्रास थपेको छ । त्रास यसकारण कि पम्पहरु बन्द भएपछि यातायातका साधनहरुले इन्धन पाउने छैनन्, सार्वजनिक यातायात प्रभावित हुने छ । मोटरसाइकलहरु पेट्रोल अभावमा स्वतः बन्द हुने छन् । लोडसेडिङले सताएका बेला विकल्पको रुपमा सञ्चालन भइरहेका जेनेरेटरहरु इन्धन अभावमा बन्द हुने छन् । इन्धनको हाहाकारले हाम्रो दैनन्दिनको कामकाजमा पार्ने असर यतिमा सीमित हुने छैन । हड्ताल लम्बियो भने त्यसले भारतले नाकाबन्दी लगाउँदाको जस्तो समस्या अनाहकमा व्यहोर्नु पर्ने छ सर्वसाधारणले । यस्तो सास्ती निम्त्याउने हड्ताल कुनै पनि बहानामा जायज हुनै सक्दैन ।
पम्प बन्द गराउने यस्तो अप्रिय कार्य अरु कसैले होइन, पम्प व्यवसायी आफैले गर्नु झनै दुर्भाग्यपूर्ण छ । राजनीतिका नाममा अरु कसैले हड्ताल गर्दा विरोध जनाउने र बन्द निषेधको पक्षमा समेत आवाज उठाउने व्यवसायीहरु आफै हड्तालमा उत्रिने निर्णयमा किन पुगेका हुन्, बुझिसक्नु छैन । पम्प व्यवसायीहरुको छाता सङ्गठन नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले सरकारको स्वामित्व रहेको नेपाल आयल निगमसँग केही माग राखेको छ, जसप्रति निगमको व्यवस्थापन उदासिन देखिएको छ । मागहरु जायज हुन सक्छन्, तर त्यसलाई पूरा गराउन आम नागरिकलाई सास्ती थोपर्ने यस्तो बन्द हड्तालको आह्वान गर्ने कार्य जायज हुँदैन । व्यवसायीहरुले निःशर्त यस्तो हड्ताल फिर्ता लिनु पर्दछ र आम नागरिकसँग भविष्यमा बन्द हड्तालको बाटो नसमाउने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्छ ।
सबैलाई थाहा भएकै छ–नेपाल आयल निगममा भ्रष्टाचारीहरुको रजाइँ छ । डिपोहरुका लागि जग्गा खरिद गर्दा करोडौँको अनियमितता गरेको खुलासा भइरहँदा समेत सरकारले दोषी पक्षलाई कठघरामा उभ्याउन सकिरहेको छैन । सदाचारी आचरण भएको नेतृत्व नभएसम्म न्याय आफै अन्यायमा परिरहेको हुन्छ भनिन्छ । निगममा अहिले चुलिएको बेथितिको जति आलोचना गरे पनि कमै हुने छ । त्यस्तो नेतृत्व भएको निगममा यतिबेलै दवाव सुनिएला भनेर पम्प व्यवसायीहरुले विश्वास गर्नु भूल हुने निश्चित छ । तसर्थ, यतिबेला व्यवसायीहरुले आफ्नो आवाजलाई निगमका भ्रष्टाचारी लखेट्ने किसिमले बुलन्द गर्न आवश्यक छ । सही, सबल र सदाचारी नेतृत्वको स्थापनाले मात्र व्यवसायीहरुको पीर मर्काको पनि सुनुवाई सम्भव छ । पम्प व्यवसायीका नाफाका मागहरुसँग आम नागरिकको कुनै सरोकार रहन्न । यो कुरा आन्दोलनको मुडमा रहेका व्यवसायीहरुले मनन गर्न ढिला गर्नु हुन्न ।
(लोकतन्त्र पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीयबाट)